Park Ji Sung ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Park Ji Sung ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Nohavaozina farany teo Desambra 28, 2018
LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny filalaon'ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Tranom-paty telo'. Ny Park Our Ji Sung tantaram-pianakaviana Plus Untold Ny zava-misy momba ny tantaram-piainana dia mitantara ny zava-nitranga rehetra nandritra ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana / background Relations Life ary ny ankamaroan'ny zava-misy momba ny OFF sy ON-Pitch. Raha tsy misy ado fanampiny, andao isika hanomboka.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram- Voalohandohan'ny fiainana
Park Ji-Sung dia teraka tamin'ny Febroary 25, 1981, tao Goheung, Korea Atsimo, Park Sung-jong (ray) sy Jang Myung-ja (reniny). Lehibe tao an-tanànan'i Suwon izy.
Park Ji-sung dia tia ireo mpilalao baolina maty nilalao mivantana sy tamin'ny fahitalavitra raha mbola zaza izy. Izany no nahatonga azy ho liana amin'ny lalao. Nisy olana anefa. Tena fohy sy kely izy. Izany no hitany ho toy ny famerana. Mba hahafahana mamaha ny olana ara-batana, ny ray aman-drenin'i Park dia tsy maintsy mandeha manga mba hahatonga ilay zanakalahin'ny baolina kanto ho lehibe sy lehibe kokoa. Nataon'izy ireo hosotroina fisotroan-drongon-dronono miaraka amin'ny ranom-boaloboka sy ny ra mivaivay amin'ny finoana fa hanampy azy hihalehibe kokoa izany. Soa ihany fa nanampy izany.
Park Ji-sung dia natoky ny tenany indray ary nanomboka nilalao baolina indray. Nirotsaka ho an'ny sekoly ambaratonga fototra izy ary nandroso tamin'ny fifaninanana. Tsy naharitra ela talohan'ny nahalalany azy ho iray amin'ireo kintana tanora mamiratra amin'ny baolina kitra Korea Atsimo. Taorian'ny fianarany tany amin'ny lisea, dia nisoratra anarana tao amin'ny Oniversiten'i Myongji ao Korea Atsimo izy.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny anaran-drainy dia Park Sung-jong raha ny anaran-dreniny no Jang Myung-ja. Niara-nipetraka ireo ray aman-dreny roa mba hijery ny zanany lahy hitombo ny nofinofiny. Ny reniny, Myung-ja no lehibe kokoa noho ilay dadany. Izy no nitantana ny orinasa metaly koreana malaza. Miala sasatra.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram-Relationship Life
Ny Park dia nitazona ny fiainany manokana tsy hohajaina ary nahagaga ny fampahalalam-baovao tamin'ny fanambaràna ny fampakarambadiny ho an'ny mpanolotra fandaharana amin'ny televiziona taloha Kim Min Ji nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Izy ireo dia nanambady tamin'ny 27 Jolay 2014 tany Korea Atsimo. Teraka tamin'ny volana 2015 ny zanany vavy.
Ireo olo-malaza dia nandondona ny tranobe satria mpilalao baolina kitraniana vao haingana Park Ji Sung ary ny mpanolotra taloha SBS Kim Min Ji dia nanao ny lanonana fampakaram-bady tamin'ny Jolay 27. Ny fampakaram-bady dia natao tao amin'ny Sheraton Grande Walkerhill Hotel tao Seoul. Ny lanonana dia natolotry ny mpanolotra SBS Bae Sung Jae, ary nasehon'ny mpandahateny ny hira fankasitrahana Kim Joo Woo.
Araka ny efa nampoizina, ny lisitry ny vahiny dia ahitana kintana marobe malaza toy ny mpilalao baolina kitra malaza Guus Hiddink, izay nanampy an'i Korea hanatratra ny Top 4 nandritra ny mondialy 2002, sy ny namany kintan'i Manchester United Patrice Evra (namany akaiky indrindra any Eoropa).
Zava-dehibe ny manamarika fa i Park Ji Sung sy i Kim Min Ji dia nivadika tamin'ny olon-tsy fantatra ho an'ireo tia ny 2011, ary efa navoaka ho an'ny vahoaka ny momba azy ireo hatramin'ny 2013.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram-Asa soa
Tamin'ny 5 tamin'ny Oktobra 2014, nanambara izy fa handray andraikitra amin'ny maha-ambasadaoro iraisam-pirenena an'i Manchester i Park. Izy koa dia nandray anjara tamin'ny hetsika fankalazana isan-taona ny fankalazana ny fankalazana ny fankalazana ny Taona noforonina miaraka amin'ny ekipa mitondra ny lohateny "Park Ji-Sung sy ny namana.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram-Ny tantara tsy fantatra momba ny fisakaizany izay nihoatra ny sakana rehetra
Ny mpiaro an'i Manchester United Patrice Evra sy Ji Sung Park no namana tsara indrindra. Tsy eo amin'ny sehatra fotsiny, fa mihabetsaka kokoa ny toerana, satria i Évra dia tia mitsidika Park. Ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo dia nahatonga ilay mpivady hifanakaiky kokoa, toy ny rahalahy. Evra aza miantso ny dadan'i Park, Park Sung Jong, Papa.
Fiainana any Angletera, ireo mpilalao roa dia lasa miankina tanteraka amin'ny fifandraisan'izy ireo. Ny Park Sung Jong dia manambara ireo tantara tsy fantatra momba ilay mpivady.
Rehefa manana lalao lalao any ivelany i Manchester United dia lasa sehatra fanangonana. Satria lafo ny seranan-tsambo any amin'ny seranam-piaramanidina dia misy mpilalao maromaro tonga ao an-tranonay mba hahafahan'izy ireo mandroso mankany amin'ny seranam-piaramanidina. Pat, Carlito, VDS ary Berba no mpanjifa mahazatra ary Ji. Mijaly foana aho rehefa mitondra azy ireo satria manainga ekipa superstars aho ary mihoatra ny 40 tapitrisa ny fandaniana azy ireo !! Noho izany dia mila mailo foana aho ary amin'ny tsara indrindra ary miezaka tsy hieritreritra momba ny fisarihana! Fa i Evra kosa dia eo anilako foana manapotipotika ny vazivazy mahazatra ataony ary manala ny ahiahy rehetra. Rehefa nandresy tamin'ny EPL izahay dia Evra no tonga voalohany ary namihina ahy sy ny vadiko ary naka sary niaraka taminay. Antsoiny koa hoe papa aho. Izany no maha-akaiky antsika, toy ny fianakaviana.
Evra dia fikambanana iraisam-pirenena Frantsay, saingy avy any Sénégal izy. Nihalehibe teny amin'ny araben'i Les Ulis izy, toeram-ponenana misy andian-jiolahy. Na izany aza, baolina kitra izy io izay nanakana an'i Evra tsy hilatsaka amin'io lalana io. Mihevitra aho fa avy any amin'io faritra io koa i Thery Henry.
Evra sy Park dia mitovy taona. Evra dia somary miarahaba kokoa noho i Ji, saingy samy tsy miresaka betsaka izy ireo ary samy manana ny heviny. Na ny Ruud Van Nistelrooy tamin'ny lasa na Edwin Van der Sar, ny ankamaroan'ny naman'i Ji dia avy any ivelany, ivelan'i Uk. Matetika ny mpilalao britanika no mifamotoana ary noho izany dia matetika ireo mpilalao vahiny dia mifamotoana ary miankina amin'ny tsirairay.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram-Mitohy ny fisakaizana ...
Mitohy ny kianja ... In ny fahavaratry ny 2007, nandritra ny Tour Asia, dia afaka nitsidika an'i Korea i Evra. Ny andro talohan'ny lalao dia tonga tao an-tranonay tao Suwon izy. Tao Manchester, nanontany anay foana izy raha afaka mitsidika ny tranonay any Korea raha manana ny làlana izy. Noho izany dia nisambotra ny fahafahana izy rehefa tonga teto Korea i Manchester United mba hitsidika anay. Tsy hoe nitodika tany amin'ny tranonay fotsiny izy, fa niangavy ahy koa izy raha afaka mitondra azy ho any amin'ny club iray any Seoul. Tsy mbola tany amin'ny trano fialam-boly nandritra ny androm-piainana aho hatramin 'ny andro nanomezako ny fanirian'i Evra.
Evra sy izaho aloha dia tsy nifankahalala tamin'ny namako, fa toy ny fahavalo niverina tany 2005. Nifanandrify tamin'ny 16 tao amin'ny Ligy Champions izy ireo, nilalao ho PSV aho ary i Evra nilalao AS Monaco. Tao amin'ny tongony roa, nilalao teo amin'ny ilany havia midadasika aho ary nilalao i Evra satria navela hody izy ireo ary matetika dia samy niady izahay roa. Tamin'ny farany, ny PSV dia nahazo ny lalao 1-0 sy 2-0. Evra indraindray mahatsiahy mikasika io lalao io. Nihetsi-po izy hoe: "Nanafotra anao aho nandritra ny alina manontolo, ka tsy nahatsiaro tena ho namanao aho." "Nalahelo anao aho." Mahagaga fa samy mahatsiaro tsara an'io lalao io izaho sy i Evra. Mino aho fa anjarantsika ny ho lasa namana tsara indrindra.
Raha vao tonga tamin'ny Janoary 2006 i Evra, dia nanana fahasarotana nanitsy ny ekipa izy. Tamin'izany fotoana izany, i Mikael Silvestre sy Gabriel Heinze dia nanamboatra ny toerana teo alohan'ny Evra ary tsy misy toerana handalovana an'i Evra. Isaky ny nanana fahafahana hilalao izy dia nanao fahadisoana ary namoy ny toerany. Nanafika izy ka adinony indraindray ny adidiny fiarovana ary namela malalaka ny marika tsy hiteny izy. Nampalahelo fa nomena anarana izy "Famerenana tsy miverina" amin'ny fizarana sasany amin'ireo mpanohana an'i Utd. Nandritra ireo fotoan-tsarotra ireo, dia izaho no nampionona an'i Evra ary nanome azy ny soroka hiantehitra. Niteny tamin'i Evra aho mikasika ireo fotoan-tsarotra niainako tany Holandy ary niezaka nanome azy ny fahatokisany nilainy.
Tonga mpinamana akaiky kokoa tamin'i Evra izahay rehefa nifindra trano teo akaikin'ny tranony aho tamin'ny Febroary 2007. Isaky ny vadin'i Evra, Patricia (anarana voalohany i Évrr dia Patrice ary Patricia no anarany voalohany), dia mamela ny zanany hitsidika havana any Frantsa, tonga ao an-tranonay i Evra ary mipetraka toy ny trano fonenany. Indraindray, manasa ahy any an-tranony izy ary miara-misakafo. Heveriko fa izany no nanazavan'i Evra ny hatsaram-panahy nomeko azy. Rehefa nodidiana tamin'ny tongony ankavia aho, tsaroako i Evra manoratra ho tsara ny hafatra nalefany. Rehefa nandalo fandidiana aho teo amin'ny lohaliny teo amin'ny lohataonan'ny 2007, dia nanokana ny tanjony i Evra tao amin'ny 7-1 izay nanosika ny Roma ho ahy.
Park Ji Sung ny tantaram-pianakaviana misongadina kokoa momba ny tantaram-fitohizan'ny
Ny rain'i Evra dia monina any Dakar, Senegaly. Evra dia milaza fa, satria ny rainy dia manambady imbetsaka, isaky ny miverina any amin'ny tanàna niaviany izy, misy Evra eto, evra et sy Evra Evra na aiza na aiza. Ny rain'i Evra matetika dia mijanona any Senegal, fa tonga androany hitsidika an'i Manchester. Tena faly i Evra nanolo-kevitra ny hilalao teo anoloan'ny rainy tao Old Trafford. Na izany aza dia nanapa-kevitra i Ferguson fa hametraka an'i Evra eo amin'ny sehatra ary taorian'ny lalao, dia tezitra mafy i Evra. Nanaisotra ny hatezerany izy kanefa rehefa nody izy dia nipoaka. Nikiakiaka izy ary nanomboka nanipy zavatra teny amin'ny tany. Mazava fa tiany ny hampirehareha ny rainy. Nijery an'i Evra aho ary nieritreritra hoe "ahoana raha efa nitranga tamiko izany?" Mahalana aho no manambara ny fihetseham-poko. Matetika aho no manafina izany. Na dia izany aza dia azoko lazaina fa diso fanantenana tanteraka izy raha tsy nahavita nanararaotra ny fahafahana hilalao amin'ny CL iray farany. Indraindray, iriko haneho kokoa ny fihetseham-poko toa an'i Evra aho.
Nandritra ny taona nahatoky, dia nifindra tao amin'ny trano nialan'i Evra izahay. Tantara telo no misy efitra fito. Evra koa dia nanetsika ny 3-4 minitra miala ny tranonay. Rehefa mandeha fiofanana aho, izaho sy i Evra dia matetika mizara fiara. Indray andro dia izaho no hitondra, ary ny ampitso dia i Evra izany. Rehefa tapitra ny fiofanana, samy mandeha any amin'ny trano fisakafoanana Koreana isika indraindray mba hihinana.
Ny fitiavan'i Evra an'i Utd dia matanjaka. Nahazo tolotra tena mahasoa avy any Inter Milan izy saingy nanodina azy avy hatrany. Isaky ny milalao lalao baolina kitra miaraka amiko izy, tsy mbola nahita azy nifidy ekipa hafa afa-tsy Utd aho. Ankehitriny dia miara-mivory indray isika ao amin'ny CL final. Andro vitsy lasa izay dia nilaza tamiko i Evra "Ry namako ry Havana, tamin'ny taona lasa izahay dia tsy nifampizara nifampizara, fa amin'izao fotoana izao dia avelao hiara-hiasa izany. Tadidio fa raha misy aminay, dia tsy maintsy miara-mankalaza izahay. "
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Park Ji Sung momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Daty efa namboarina: 4 may 2020
Shinji Kagawa tantaran'ny tantaram-pahagagana maro tsy hita isa